Gịnị bụ Real-Bidding (RTB)? | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 17, 2015 Fraịde, Septemba 18, 2015 Douglas Karr
N’ebe a na-akwụ ụgwọ, ngosipụta na mgbasa ozi mkpanaka, enwere ọtụtụ ngwa ahịa ị ga-eji zụta echiche. Iji nweta nsonaazụ siri ike, ị kwesịrị ịnwale ịzụrụ otu narị otu narị ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ puku nchịkọta isiokwu na ọchụchọ akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ị na-eme ngosipụta mgbasa ozi ma ọ bụ mgbasa ozi mkpanaka, ngwa ahịa nwere ike gbasaa n'etiti narị otu narị ma ọ bụ puku saịtị ma ọ bụ ngwa.
Gịnị bụ Real-ere ahịa?
Iji aka nyochaa ma kwuo na ebe ịchọrọ ịkpọsa agaghị ekwe omume. Iji dozie nke a, ọchụchọ na-akwụ ụgwọ na mgbanwe mgbasa ozi na-eji ngwa ahịa oge (RTB). Site na ntinye oge, onye na-ere ahịa na-egbochi nrụgide nke mgbasa ozi ha na mmefu ego ha, yana sistemụ ahụ na-ekwurịta maka ntinye ọ bụla na ntanye oge na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo.
RTB nwere ike ịdị irè ma dị egwu. Ọ bụrụ na ị bụghị aka ọrụ, ị nwere ike ịtọ na-agaghị emeli na gị mgbasa ozi ịzụrụ na ida gị mmefu ego site na mgbasa ozi na-adịghị arụ ọrụ isiokwu n'ịgwa ma ọ bụ na-adịghị mkpa na saịtị. Emechara nke ọma, agbanyeghị, arụmọrụ na arụmọrụ nke RTB karịrị nkwado aka ọ bụla.
Olee otú Real-Bidding Advanced?
Nnukwu nyiwe data nwere ike wepu ma gbanwee ọtụtụ nde ndekọ na ezigbo oge - gụnyere data ntụgharị - na-enyere aka ịmalite RTB karịrị naanị iwelata ọnụahịa ịgba ọsọ na ịba ụba site na ọnụego Site na nyocha data ntughari na oge, onye nleta, na ọbụnakwa akụrụngwa akụrụngwa, nyiwe RTB na-enwe ike ịkọwa ọkwa nke mgbasa ozi ziri ezi, n'oge kwesịrị ekwesị, n'ihu onye ziri ezi, na ngwaọrụ ziri ezi.
Anyị kwuru banyere ezigbo oge bidding ike na Mgbasa ozi mmemme na pọdkastị anyị na nso nso a na Pete Kluge. Jide n'aka na ịge ntị na pọdkastị - ọ bụ ezigbo mkparịta ụka.
Gee ntị na Ajụjụ ọnụ nke Pete Kluge nke Adobe
Ihe niile I Kwesịrị tomara Banyere Bidding Real-Time
Nke a bụ nkọwa zuru ezu banyere Real-Time bidding na infographic.
Video si Mgbasa ozi.
Tags: Mgbasa ozingosipụta mgbasa ozikwụọ ụgwọ kwa Pịappcezigbo oge biddingrtb
Wzọ 13 iji zube mgbasa ozi mgbasa ozi gị